Zụrụ Cyproterone acetate ntụ ntụ (427-51-0) hplc ma98% | AASraw
Cyproterone Acetate ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Nwoke Jiri / Cyproterone Acetate ntụ ntụ
SKU: 427-51-0. Categories: Nwoke Jiri, Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Cyproterone acetate powder (427-51-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Cyproterone acetate ntụ ntụ bụ ọgwụgwọ hormone na aha ya bụ Cyprostat, Androcur, Andro-Diane, Cyprone, Dianette Ọ bụ ụdị ọgwụ a na-akpọ anti androgen.
Cyproterone acetate ntụ ntụ video
Cyproterone acetate ntụ ntụ isi agwa
aha: Cyproterone acetate ntụ ntụ
Molekụla Formula: C24H29ClO4
Ọbara arọ: 416.94
Melt Point: 200-201 ° C
Nchekwa Nche: 2-8 ° C
Cyproterone acetate ntụ ntụ na nhazi ozubu
Aha aha: Cyprostat, Androcur, Andro-Diane, Cyprone, Dianette
Aha aha: Cyproterone acetate ntụ ntụ, Diane-35 ntụ ntụ, 427-51-0
Cyproterone acetate ntụ ntụ Usage
Cyproterone acetate ntụ ntụ dị dị ka ọnụ ọgụgụ (site n'ọnụ) mbadamba nkume na dị ka onye na-eme ogologo injectable. Ụdị a tụrụ aro maka Cyproterone acetate mbadamba mbadamba bụ 200 mg na 300 mg (4 na 6 mbadamba) kwa ụbọchị, kee ya na 2 ka doses 3 ma were ya mgbe nri gasịrị.
Maka ndị ikom nwere orchiectomy (mwepụ nke testicles), a na-atụ aro ka a na-atụle 100 mg na 200 mg kwa ụbọchị na nkewa dị iche iche. Ntụziaka a tụrụ aro maka ụdị ogologo oge nke Cyproterone acetate raw powder (Androcur® Depot) bụ 300 mg na-agbanye n'ime ahụ ike otu ugboro n'izu.
Ọtụtụ ihe nwere ike imetụta ọgwụ nke mmadụ chọrọ, dị ka ibu ahụ, ọnọdụ ahụike ndị ọzọ, na ọgwụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na dọkịta gị akwadoro ọgwụ dị iche na ndị depụtara ebe a, anaghị agbanwe ụzọ ị na-eji ọgwụ ahụ na-ekwughị dọkịta gị.
Cyproterone acetate ntụ ntụ nwere ike ime ka ike na ike gwụrụ mgbe mbụ ịmalite iji ya. Mgbe ihe dị ka ọnwa nke atọ, ọgwụ gị ga-eji ahụ gị mara ma a ghaghị ibelata mmetụta a.
Ọ dị mkpa ịṅụ ọgwụ a kpọmkwem dị ka dọkịta gị si chọọ. Ọ bụrụ na ị na-atụfu ọgwụ, mee ya ngwa ngwa o kwere mee. Ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge maka ọgwụgwọ ọzọ gị, gbanye ụda efu ma nọgide na usoro ịhazi oge gị. Ejila okpukpu abụọ mee ihe maka otu onye. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga-eme mgbe ị na-efughị ​​ọgwụ, kpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ maka ndụmọdụ.
Mmanya na-aba n'anya ga-ejedebe mgbe ị na-ewere Cyproterone acetate raw powder n'ihi na ọ nwere ike belata irè ọgwụ ahụ.
Na-echekwa ọgwụ ahụ na ime ụlọ, chebe ya site na ìhè na mmiri, ma mee ka ọ ghara inweta ụmụaka.
Enwela ọgwụ na mmiri mkpofu (dịka ala sink ma ọ bụ na mposi) ma ọ bụ n'ime ụlọ mkpofu. Jụọ onye na-ere ọgwụ gị ka ị ga-esi gbanye ọgwụ ndị na-adịghịzi mkpa ma ọ bụ nwụọla.
Ejila ọgwụ a ma ọ bụrụ na ị:
-nke na-enwe nsogbu ma ọ bụ na-echere Cyproterone acetate ntụ ntụ ma ọ bụ ihe ọ bụla dị na ọgwụ a
-agbanye ọrịa imeju aru ma ọ bụ belata ọrụ imeju
-ha belata ọrụ akụrụ
Ịdọ aka ná ntị na Cyproterone acetate ntụ ntụ
Tupu ịmalite iji Cyproterone acetate ntụ ntụ, jide n'aka na ị ga-agwa dọkịta gị banyere ọnọdụ ọgwụgwọ ọ bụla ma ọ bụ allergies ị nwere ike ịnweta, ọgwụ ọ bụla ị na-aṅụ, ma ị dị ime ma ọ bụ na-enye nwa ara, na ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa gbasara ahụ ike gị. Ihe ndị a nwere ike imetụta otú ị kwesịrị isi jiri ọgwụ a.
-Aṅụṅụ mmanya: A ga-ebelata ọgwụ nke Cyproterone acetate raw ntụ ntụ ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmanya. Ị ga-amachi oke mmanya ị na-aṅụ mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a.
-Depression: A na-ejikọta oge Cyproterone acetate ntụ ntụ na ụba nke mgbanwe mgbanwe ọnọdụ uche, karịsịa na mmalite usoro ọgwụgwọ. Ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ịda mbà n'obi n'oge gara aga.
-Diabetes: Cyproterone acetate raw ntụ ntụ nwere ike ime ka ọkwa glucose ọbara bawanye ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga.
- Ọrịa na-akpata ọrịa: Cyproterone acetate ntụ ntụ nwere ike ime ka mmiri jupụta n'ime ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa obi, kpachara anya mgbe ị na-eji ọgwụ a eme ihe n'ihi na obi gị nwere ike ịrụ ọrụ siri ike.
Ọrịa ọrịa: Cyproterone acetate raw ntụ ntụ nwere ike imebi imeju. Ọ na-amalitekarị mgbe ọtụtụ ọnwa gasịrị. Dọkịta gị ga-enyocha ọrụ imeju gị na nyocha ọbara ma ọ bụrụ na e nwere ihe mgbaàmà ma ọ bụ ihe ịrịba ama nke mmebi imeju.
-Achọpụta: Cyproterone acetate ntụ ntụ abụghị maka nwanyi.
-Breast-nri: Cyproterone acetate raw ntụ ntụ bụghị maka iji ndị inyom.
Ụmụaka: Cyproterone acetate ntụ ntụ adịghị akwado maka iji ya mee ihe na ụmụaka
Cyproterone acetate ntụ ntụ, Nnu acetate nke steroidal steroidal antiandrogen na-adịghị ike progestational na antineoplastic eme. Cyproterone acetate raw ntụ ntụ na-ejikọta androgen receptor (AR), si otú a egbochi mmezi na-eme ka onye na-anabata ihe na-eme ka etrogen na-egbochi uto nke mkpụrụ ndụ ụbụrụ na-ahụ maka ụbụrụ testosterone. Onye ọrụ a na-arụkwa ọrụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na-ahụ maka nrụrụ nke na-ebelata ọgwụ hormone (LH), nke na-akpata nkwụsịtụ na secretion androgen na secretion na testosterone. Ọgwụgwọ na Cyproterone acetate ntụ ntụ naanị na - emepụta ezughị ezu nke ọbara ọbara testosterone. Lelee maka ule na-ahụ maka ahụike na-arụ ọrụ na-eji nke a.
Usoro ihe omuma nke Cyproterone acetate raw powder is bu:
Cyproterone acetate raw ntụ ntụ
Cyproterone acetate raw ntụ ọka Marketing
Otu esi zụta Cyproterone acetate ntụ ntụ si AASraw
Cyproterone acetate ntụ ntụ Ezi ntụziaka
1 nyochaa maka Cyproterone Acetate ntụ ntụ
Cyproterone Acetate ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi
Finasteride ntụ ntụ
gosiri 4.00 si 5
Trestolone Acetate (MENT) ntụ ntụ
Methandrostenolone (Dianabol) ntụ ntụ
Methylprednisolone ntụ ntụ